အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ဆက်လက်ပေးအပ်ရန် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များအား တာလီဘန် တာဝန်ရှိသူ တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ကဘူးလ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တာလီဘန် အစိုးရအသစ် ခေတ္တနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Amir Khan Muttaqi က အာဖဂန်ပြည်သူများအတွက် အကူအညီပံ့ပိုးမှု ဆက်လက်ပေးအပ်ကြရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။“အာဖဂန်ပြည်သူတွေကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ ဆက်လက်ပေးဖို့ ကမ္ဘာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်က ပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးက အကူအညီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လိုအပ်နေပါသေးတယ်” ဟု Muttaqi က သတင်းထောက်များအား ပြောခဲ့သည်။
“အာဖဂန်ကို ကူညီနေတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ မိုးခေါင်ရေရှားမှု ရုန်းကန်ရတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးကို သူတို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် “လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံရေးကိစ္စနှင့်” မပေါင်းစပ်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဩဂုတ် ၁၅ ရက်က ကဘူးလ်မြို့တော်အား တာလီဘန် မသိမ်းပိုက်မီက အာဖဂန်နစ္စတန်မှ ထွက်ခွာသွားကြသော သို့မဟုတ် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များက နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကြသော နိုင်ငံခြားသား ကူညီရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်း အကူအညီပေးရေးအတွက် ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
“အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ စစ်ပွဲရော ပဋိပက္ခရော မရှိတော့ပါဘူး။ တရားဝင်အထောက်အထားကိုင်ဆောင်ထားပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်က ထွက်ခွာသွားတဲ့ အာဖဂန် ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအားလုံးလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အားလုံးနဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့လည်ပတ်မှုတွေကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါပြီ။ ကူညီပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအတွက်လည်း လုံခြုံရေးနဲ့ ဘေးကင်းရေးကို စိတ်ချရစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဂျီနီဗာတွင် ပြုလုပ်သော အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွင် ကူညီပေးရေး အေဂျင်စီများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် အာဖဂန်နစ္စတန်အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ကူညီရန် ကြေညာခဲ့ပြီး တစ်ရက်အကြာ ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဂျီနီဗာမှာ ကတိပြုခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကူညီပေးမယ့် မကြာသေးမီက ကြေညာချက်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံများနှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးများ ကောင်းမွန်လိုကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
KABUL, Sept. 14 (Xinhua) — Amir Khan Muttaqi, acting foreign minister of the new Taliban government, on Tuesday urged the international community to continue providing assistance to the Afghan people.
“We appeal from all countries, which were involved in assisting Afghans in fields of education, health, refugees, and the struggle against the drought, to continue their support in the mentioned fields,” he said.
They should not combine the “humanitarian issues with the political issues,” he said.
He also urged all foreign aid workers who left Afghanistan before the Taliban’s takeover of the capital Kabul on Aug. 15 or in recent weeks to return to the country.
“There is no war and clashes in Afghanistan. All Afghans and foreigners holding legal documents who left Afghanistan, can return without any fears. They can restart their operations in every field and provide services. Security and safety will be ensured for all aid workers,” he said.
“We are thankful for recent announcement of 1 billion U.S. dollars pledged in Geneva,” he said, adding Afghanistan wants good bilateral and economic ties with countries around the world. Enditem
Photo : Acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi speaks duringapress conference in Kabul, Afghanistan, Sept. 14, 2021. Muttaqi on Tuesday urged the international community to continue providing assistance to the Afghan people. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)